Iziganeko zeBhunga lamaShishini oMlingane kunye neKhowudi yokuXhasa ukuphela kokuThengiswa kwabantwana
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Amalungelo abantu » Iziganeko zeBhunga lamaShishini oMlingane kunye neKhowudi yokuXhasa ukuphela kokuThengiswa kwabantwana
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Amalungelo abantu • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba ezahlukeneyo
I-CEO yeBhunga lezoShishino lwezeMicimbi u-Amy Calvert ngokujoyina iKhowudi
Namhlanje, nge-30 kaJulayi, ngo-2021, uSuku lweHlabathi ngokuchasene nokuRhweba ngabantu ngokungekho mthethweni ngo-2021, iBhunga lezoShishino lwezeMicimbi (i-EIC), ilizwi elizweni kushishino lweziganeko zeshishini kukhuselo, uphando, ukwamkelwa kobungcali, kunye nemigangatho, ibhengeze ukuba ijoyine iKhowudi, inyathelo lamaqela amaninzi lokuthintela ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo.
I-EIC iye yasayina iKhowudi ebonelela ngokwazisa, izixhobo kunye nenkxaso kushishino lokhenketho nokhenketho ukukhusela abantwana ekuxhatshazweni ngokwesondo.
IKhowudi luseto lokuzithandela lweendlela ezintandathu amalungu azibophelela kuzo, ukugcina abantwana bekhuselekile.
Ikhowudi ixhaswa yi-ECPAT, uthungelwano lwehlabathi lwemibutho esebenza ukuphelisa ukuxhaphazwa ngokwesondo kwabantwana kwihlabathi liphela.
U-Amy Calvert, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba, kwiKhansile yoShishino lwezeMisitho, uthe: “I-EIC ixhasa zonke iinzame zokulwa ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, kwaye siyazingca ngokujoyina le Khowudi ukuxhasa iinjongo zayo zehlabathi. Ngokwe-International Labour Organisation (ILO), bangaphezu kwezigidi ezingama-40 abantu abahlala kubukhoboka kwihlabathi liphela; ngokusebenza neKhowudi kunye ne-ECPAT singadlala eyethu indima ekupheliseni ukurhweba ngabantu ngokuxhaphaza nokuxhaphaza. Ngenxa yobungakanani nobungakanani beshishini lethu sinako ukuba sisishukumisi sotshintsho olunentsingiselo nolungapheliyo kunye nenkqubela phambili.
Le Khowudi siseti yokuqala kunye nokuzithandela kwimigaqo-nkqubo yezoshishino ezinokumiliselwa ukuthintela ukuxhaphazwa ngokwesondo nokuthengiswa kwabantwana. Le Khowudi iyakuxhasa i-EIC, umanyano lwamazwe ehlabathi oluxhasa ushishino lweziganeko zeshishini, ngokusebenzisana nokubonisana nabachaphazelekayo kuthintelo lokuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo; ukuseka imigaqo-nkqubo neenkqubo; qeqesha abasebenzi; zibandakanya igatya kwizivumelwano; nokubonelela ngolwazi kubahambi ngendlela yokuthintela kunye nokuxela amatyala abarhanelwa.